အာရှ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
တရုတ်အစိုးရသည် Belt Road စီမံကိန်းကိုကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများနှင့်ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်နေသည်။ အောက်တိုဘာလအတွင်း 30 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွင်တရုတ်အုပ်ချုပ်ရေးသည် 137 နိုင်ငံနှင့် 197 မျိုးဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ရေးသဘောတူညီမှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ [ပို ... ]
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှေးအကျဆုံးအများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအနက်မှရထားများမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်ရာစုနှစ်များစွာရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်တိုးတက်လာသောနည်းပညာဖြင့်ရထားများပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ကုန်တင်ကုန်ချခြင်းနှင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်မကြာခဏပိုမိုနှစ်သက်သည်။ သငျသညျမှ [ပို ... ]
သံပိုးလမ်းသည်အီရန်နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ အီရန်၏ရထားလမ်းများသည်တရုတ်၏ One Generation One Way စီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အမျိုးသားရုပ်သံလိုင်းသို့ပြောကြားရာတွင်အီရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀ န်ကြီးမိုဟာမက်အစ်စလာမီ၊ One Generation One Way [ပို ... ]
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်ရထားနှစ်စင်းတိုက်မိခြင်း။ 15 သေပြီ၊ ပြီးခဲ့သည့်ညကဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်ဒေသစံတော်ချိန် 58 တွင်၊ ဒါကာအရှေ့ဘက်ရှိ Brahmanbaria ဒေသမှစစ်တကောင်းမှထွက်ခွာသည့်ရထား [ပို ... ]
အိန္ဒိယတွင်ခရီးသည်တင်မီးရထားနှစ်စင်းတိုက်မိ 16 ဒဏ်ရာရ; အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ခရီးသည်တင်ရထားလမ်း လွဲ၍ အခြားခရီးသည်တင်ရထားတစ်စင်းကိုတိုက်မိသည်။ 16 လူတွေဟာ Hyderabad မီးရထားမတော်တဆမှုမှာဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ Telangana ရှိ Hyderabad မြို့မတော်တဆမှု [ပို ... ]
ရုရှားခရိုင်းမီးရထားပျံသန်းမှုများစတင်; ခရိုင်းမီးယားတံတားဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူရုရှားပြည်မသည်ခရိုင်းမီးယား၊ မော်စကိုနှင့်စိန့်ပီတာစဘတ်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ 25 [ပို ... ]
တူရကီဂျော်ဂျီယာရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး၏ဆောက်လုပ်ရေး; တူရကီနှင့်ဂျော်ဂျီယာ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်ဗဟိုအာရှ၏တူရကီသမ္မတနိုင်ငံများအကြားရထားလမ်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်စေရန်။ [ပို ... ]
တရုတ်မောင်းသူမဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုစတင်; တရုတ်၏ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော 350 ကီလိုမီတာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားသည်အပူချိန်၊ အလင်းရောင်နှင့်ပြတင်းပေါက်အရောင်စသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့်နည်းပညာနှင့်အတူအမြန်နှုန်းမြန်သောရထား [ပို ... ]
TİKA tarafından II. Abdülhamid Han döneminin en önemli projelerinden biri olan Hicaz Demiryolu Amman Tren İstasyonu’nun restorasyonu ve demiryolunun tamamının anlatıldığı müze binası yapılıyor. II. Abdülhamid Han döneminin en önemli [ပို ... ]
မော်စကို Kazan အဝေးပြေးစီမံကိန်းအတည်ပြုချက်
မော်စကိုကာဇန်းအဝေးပြေးစီမံကိန်းအတည်ပြုချက်၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သောအရေးကြီးသောအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းအတွက်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ရုရှား ၀ န်ကြီးချုပ် Dmitri Medvedev ကမော်စကိုအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ Vedomosti [ပို ... ]